စီးပှားဖွဈ တပိုငျတနိုငျ ကြောကျဖရုံယို လုပျနညျး……. – Youth Bar
စီးပှားဖွဈ တပိုငျတနိုငျ ကြောကျဖရုံယို လုပျနညျး…….
ကြောကျဖရုံယို လုပျနညျး ပါဝငျအစ်စညျး မြား
အတျောလေးရငျ့သော ကြောကျဖရုံသီး – ကီလိုဝကျ (၃၂ ကပျြသားခှဲခနျ့)ထုခထြေားသော ကြောကျခဉျြ (alum) – လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ ဇှနျးခနျ ကှမျးစားထုံး (lime stone or Chuna or Choona) – လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ ဇှနျးခနျ့
၆ နာရီခနျ့စိမျထားပွီးနောကျ ထုံးမြား ပွောငျစငျသှားအောငျ ရဆေေး၊ ရေ စဈထားပါ။ ရစေဈပွီးနောကျ ပှကျပှကျဆူနသေော ရေ –5cups (1250 ml)ထဲ ထညျ့ပွီး အိုးအဖုံး မဖုံးပဲ high heat ဖွငျ့ ၃ မိနဈ တညျထားပါ။ (ရပွေနျဆူလာလြှငျ အနညျးငယျမှပေေးပါ။)
ဖရုံသီးဖတျမြားကို မကပျသညျ့အိုးထဲထညျ့ကာ medium high heat ဖွငျ့ မိနဈ ၂၀ ခနျ့ တညျထားပါ။ သံပုရာရညျကို ဖွနျ့ပွီးထညျ့ပေးပါ။ သကွားရညျမြားပူပွီး အနညျးငယျ စပှကျလာလြှငျ အိုးကပျပွီး မတူးအောငျ မကွာခဏမှပေေးဖို့ လိုပါတယျ။
မိနဈ ၂၀ ခနျ့ (သို့) သကွားရညျမြား ကျောရညျကဲ့သို့ ပဈြလာသညျနှငျ့ medium low heat သို့လြှော့ကာ တတျနိူငျသမြှ တဈအိုးလုံး နှံ့အောငျ ခွဈပွီး အဆကျမပွတျမှပေေးပါ။
(သကွား နှငျ့ ကြောကျဖရုံသီးမြား အိုးဖွငျ့ကပျကာ တူးပွီး ရှဝေါရောငျပွောငျးသှားတတျ၍ အိုးကို ခွဈပွီးမှပေေးဖို့လိုပါတယျ။) ၃ မိနဈခနျ့ကွာလြှငျ (သို့) သကွားအတုံးအခဲမြား စဖွဈလာလြှငျ (သကွားက ခပျထနျ့ထနျ့အနအေထားပါ) low heat သို့လြှော့ကာ ၂ မိနဈခနျ့ အဆကျမပွတျမှပေေးပါ။ (မှရေတာ လှယျကူမွနျဆနျစရေနျ spatula ကိုပွောငျးသုံးထားပါတယျ။)
အေးသှားပွီးနောကျ ကွှပျကွှပျလေးနှငျ့ သကွားရညျဝနသေော ကြောကျဖရုံ ယိုလေး အရသာရှိစှာ သုံးဆောငျနိုငျပါပွီ။
အပိုထှကျလာတဲ့ သကွားတှေ ဘာလုပျရမှာလညျးမသိဖွဈနရေငျတော့ ကြောကျဖရုံယိုနဲ့ ရောပွီး သိမျးထားတယျလို့ ရပါတယျနျော။Credit
ကျောက်ဖရုံယို လုပ်နည်း ပါဝင်အစ္စည်း များ
အတော်လေးရင့်သော ကျောက်ဖရုံသီး – ကီလိုဝက် (၃၂ ကျပ်သားခွဲခန့်)ထုချေထားသော ကျောက်ချဉ် (alum) – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းခန် ကွမ်းစားထုံး (lime stone or Chuna or Choona) – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းခန့်
၆ နာရီခန့်စိမ်ထားပြီးနောက် ထုံးများ ပြောင်စင်သွားအောင် ရေဆေး၊ ရေ စစ်ထားပါ။ ရေစစ်ပြီးနောက် ပွက်ပွက်ဆူနေသော ရေ –5cups (1250 ml)ထဲ ထည့်ပြီး အိုးအဖုံး မဖုံးပဲ high heat ဖြင့် ၃ မိနစ် တည်ထားပါ။ (ရေပြန်ဆူလာလျှင် အနည်းငယ်မွှေပေးပါ။)
၁ နာရီခန့် ဖြန့်ထားပြီးနောက် ကျောက်ဖရုံသီး နှင့် သကြားကို ဇလုံထဲထည့်ပြီး နှံ့သွားအောင် ခပ်ဖွဖွမွှေကာ အဖုံးဖုံးပြီး သကြားရည်များ ဖရုံသီးထဲ စိမ့်ဝင်အောင် တစ်ညအိပ်ထားပါ။ (ရေလုံးဝ မထည့်ရပါ။)
ဖရုံသီးဖတ်များကို မကပ်သည့်အိုးထဲထည့်ကာ medium high heat ဖြင့် မိနစ် ၂၀ ခန့် တည်ထားပါ။ သံပုရာရည်ကို ဖြန့်ပြီးထည့်ပေးပါ။ သကြားရည်များပူပြီး အနည်းငယ် စပွက်လာလျှင် အိုးကပ်ပြီး မတူးအောင် မကြာခဏမွှေပေးဖို့ လိုပါတယ်။
မိနစ် ၂၀ ခန့် (သို့) သကြားရည်များ ကော်ရည်ကဲ့သို့ ပျစ်လာသည်နှင့် medium low heat သို့လျှော့ကာ တတ်နိူင်သမျှ တစ်အိုးလုံး နှံ့အောင် ခြစ်ပြီး အဆက်မပြတ်မွှေပေးပါ။
(သကြား နှင့် ကျောက်ဖရုံသီးများ အိုးဖြင့်ကပ်ကာ တူးပြီး ရွှေဝါရောင်ပြောင်းသွားတတ်၍ အိုးကို ခြစ်ပြီးမွှေပေးဖို့လိုပါတယ်။) ၃ မိနစ်ခန့်ကြာလျှင် (သို့) သကြားအတုံးအခဲများ စဖြစ်လာလျှင် (သကြားက ခပ်ထန့်ထန့်အနေအထားပါ) low heat သို့လျှော့ကာ ၂ မိနစ်ခန့် အဆက်မပြတ်မွှေပေးပါ။ (မွှေရတာ လွယ်ကူမြန်ဆန်စေရန် spatula ကိုပြောင်းသုံးထားပါတယ်။)
အေးသွားပြီးနောက် ကြွပ်ကြွပ်လေးနှင့် သကြားရည်ဝနေသော ကျောက်ဖရုံ ယိုလေး အရသာရှိစွာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
အပိုထွက်လာတဲ့ သကြားတွေ ဘာလုပ်ရမှာလည်းမသိဖြစ်နေရင်တော့ ကျောက်ဖရုံယိုနဲ့ ရောပြီး သိမ်းထားတယ်လို့ ရပါတယ်နော်။Credit
ဒီလို လက်ခဏာတှေ ပွနရေငျတော့ သငျ့အဆုတျကို ဆရာဝနျနဲ့ အမွနျဆုံးစဈဆေးသငျ့ပါပွီ